Unoyeuka Here?—December 2016 | Yokudzidza
Nharireyomurindi—Yekudzidza | December 2016
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kamba Kannada Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Wakanyatsoverenga here magazini eNharireyomurindi emwedzi mishoma yapfuura? Ona kana uchikwanisa kupindura mibvunzo inotevera:
Jesu aitaura nezvekutadza kwakaita sei pana Mateu 18:15-17?
Aitaura nezvenyaya dzinogona kugadziriswa nevanenge vatadzirana vacho vasina havo kuudza vamwe. Asi kutadza kwacho kunenge kwakakura zvekuti anenge atadza wacho anogona kudzingwa kana vasina kuwirirana. Semuenzaniso, zvivi zvakadaro zvinogona kusanganisira kutaura zvakaipa nezvemumwe munhu kana kubiridzira.​—w16.05, peji 7.
Zvii zvaungaita kuti ubatsirwe nezvikamu zvese zviri muBhaibheri?
Unogona kuita izvi: Verenga uine chido chekudzidza zvinhu zvitsva, ona kuti zvauri kuverenga zvinokubatsira sei muupenyu hwako; zvibvunze mibvunzo yakadai sekuti ‘Ndingashandisa sei zvandiri kuverenga kuti ndibatsire vamwe?’; uye shandisa zvinhu zvekutsvakurudza nazvo kuti uwedzere kunzwisisa zvawaverenga.​—w16.05, mapeji 24-26.
Zvakaipa here kuti muKristu anenge afirwa ashungurudzike kunyange achitenda kuti kune rumuko?
Kutenda kuti kune rumuko hakuite kuti muKristu asarwadziwa paanofirwa. Abrahamu akachema pakafa Sara. (Gen. 23:2) Nekufamba kwenguva, kushungurudzika kwacho kunoita kuchidzikira.​—wp16.3, peji 4.
Murume ane nyanga yeingi yomunyori anotaurwa muchitsauko 9 chaEzekieri uye varume vatanhatu vakabata zvombo vanofananidzirei?
Tinonzwisisa kuti vanofananidzira mauto ekudenga akabatanidzwa pakuparadza Jerusarema uye achabatanidzwawo pakuparadza nyika yakaipa yaSatani paAmagedhoni. Pakuzadzika kweuprofita uhwu mazuva ano, murume ane nyanga yeingi yomunyori anomiririra Jesu Kristu, uyo anoisa chiratidzo pavanhu vachapona.​—w16.06, mapeji 16-17.
Zvii zvaigona kuita kuti Bhaibheri riparare?
Zvinoti: (1) zvinhu zvainyorerwa zvakadai sematehwe uye mapepa enhokwe zvinoparara; (2) vatungamiriri vezvematongerwo enyika nevezvitendero vaiedza kuriparadza; uye (3) vamwe vakaedza kuchinja mashoko aro.​—wp16.4 mapeji 4-7.
Zvii zvingaitwa nemuKristu kuti asava nezvakawanda muupenyu hwake?
Ziva zvinokosha zvaunoda, uye bvisa zvinhu zvinokudyira mari asi zvisingakoshi. Nyora bhajeti inoenderana nemari yako. Ipa vamwe zvinhu zvausingashandisi, uye bhadhara chero zvikwereti zvaunazvo. Deredza nguva yaunoshanda kubasa, uye ronga kuti ungawedzera sei ushumiri hwako.​—w16.07, peji 10.
Chii chinonzi neBhaibheri chinokosha kupfuura sirivha negoridhe?
Jobho 28:12, 15 inoratidza kuti uchenjeri hunobva kuna Mwari hunokosha kupfuura goridhe kana sirivha. Sezvaunotsvaga uchenjeri uhwu, ramba uchizvininipisa, uye ramba uine kutenda kwakasimba.​—w16.08, mapeji 18-19.
Zvakakodzera here kuti hama ichengete ndebvu mazuva ano?
Mune dzimwe tsika, ndebvu dzakanyatsochekererwa dzinogona kugamuchirika kana kuremekedzeka, uye dzingasaita kuti vanhu varambe kuteerera mashoko eUmambo. Kunyange zvakadaro, dzimwe hama dzingasarudza kusachengeta ndebvu. (1 VaK. 8:9) Mune dzimwe tsika kana kuti nzvimbo vanhu havawanzochengeti ndebvu, uye hazvigamuchiriki kuti Zvapupu zvaJehovha zvive nadzo.​—w16.09, peji 21.
Nyaya yaDhavhidhi naGoriyati ndeyechokwadi here?
Munhu akareba kupfuura vese vakanyorwa nezvavo mazuva ano anopfuurwa naGoriyati nemasendimita 15 chete. Dhavhidhi aivako zvechokwadi, sezvinoratidzwa nechinyorwa chekare chinotaura nezveimba yaDhavhidhi uye sezvinoratidzwa nezvakataurwa naJesu. Nzvimbo dzinotaurwa munyaya yacho dzinoenderana nezvinozivikanwa.​—wp16.5, peji 13.
Zivo, kunzwisisa, uye uchenjeri zvakasiyana papi?
Munhu ane zivo anounganidza mashoko echokwadi. Munhu anonzwisisa anogona kuona kuti chimwe chokwadi chakabatana papi nechimwe. Asi munhu ane uchenjeri anokwanisa kubatanidza zivo nekunzwisisa ozvishandisa nenzira yakanaka.​—w16.10, peji 18.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Unoyeuka Here?
Unoyeuka Here?​—December 2016
NYAYA YEUPENYU Kuva “Zvinhu Zvose Kuvanhu Vemarudzi Ose”
Makasunungurwa Nemutsa Usina Kukodzera Kuwanwa
‘Kuisa Pfungwa Pazvinhu Zvomudzimu Kunoreva Upenyu Norugare’
Kanda Kuzvidya Mwoyo Kwako Kwose Pana Jehovha
Jehovha Anopa Mubayiro Vaya Vanomutsvaka Nomwoyo Wose
Kuva Munhu Munyoro​—Kunoratidza Uchenjeri
Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi dza2016
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA December 2016
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA December 2016
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA December 2016
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA December 2016
Unoyeuka Here?—December 2015
Unoyeuka Here?—June 2016